Haddii Aad Rabtid Inaad Soo Ceshato Jacaylkaagi Hore, Fadlan Iska Ilaali Qaladaadkan - Aayaha
Hani OsmanOctober 13, 2019
Waxaad kala tagteen ninkaagi ama xaaskaagi hore balse iminka waxaad dareemeysaa inay tahay waqtigii aad dib usoo ceshan lahayd.
Waxaad diyaar u tahay inaad cafiso ama aad raalli geliso iyo isbedel sidaa darteed waad soo ceshan kartaa. Waa tallaabo wanaagsan balse waxaad u baahantahay inaad warbixintaan si taxadar leh aad u akhriso.
Uma baahnid inaad xaaladda uga sii darto ama aad sameyso waxyaabo kaasii fogeynaya qofka. Iska ilaali inaad sameyso qaladaadkan guud oo dadka badankood ay sameeyaan.
Oohin iyo baryo fursad kale
Ugu horeyn, haddii aad tahay nin tani waa inaysan noqon xeelad aad kusoo ceshaneyso haweeney. Way kaasii fogeeyneysaa gabadha maadaama aad u ekaaneyso inaad weysay raganimaada,blasé xittaa haweenka waa inaysan ooyin isla markaana aysan baryin fursad kale.
Waa caadi inaad dhahdo waanka xumahay isla markaana aad muujiso inaad diyaar u tahay inaad bilaawdo nolol cusub. Balse oohinta? Marnba sidaas ha sameyn oo ha ilmeyn si fursad kale laguu siiyo.
Inaad mar kasta farriin aad u dirto
Ha noqon qofka noocaas oo 5 farriin dira iyadoo aanan lasoo jawaabin. Waxay kaa dhigeysaa qof u muuqdo mid baahi badan qofkaas u qaba kaliya.
Lamaanahaagi amaa saaxiibkaa hore dib kuuguma soo laabanayo hadii uu dareemo inaad aad u rabto. Intaad u diri lahayd kumanaan farriimo ah waxaa ka wanaagsan inaad isku daydo inaad wacdo si aad u aragto haddii aad la kulmi karto isla markaana aad ula sheekeysan karto waji ka waji.
Isku dayid inaad lamaanahaagi hore aad maseyr geliso
Haddii aad moodo in saaxiibkaa hore oo aad u sheegto inaad aragto qof kale ay keeneyso inuu dib kuugu soo laabto waad qaldantahay ma dhacayso taas.
Xaqiiqdii, hadii uu dareemo inaad been sheegeyso si aad u maseye geliso wuxuu lumen doonaa ixtiraamka uu kuu haayay.
Waligaa makusoo maray qofaad kala tagteen oo ku hanjabaya inuu isdilayo haddii aadan usoo laaban?
Qofkaasi waa mid dareen xun. Haddii aad xeeladdan u isticmaasho qofaad horey u kala tagteen, xittaa mar labaad kama fekerayo inuu kusiiyo fursad kale.
3 Waxyaabood Oo Laga Eego Qofka Aad Rabtid Inaad Nolosha La Wadaagto